စစ်တပ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အတွက် ပထမဆုံး စိန်ခေါ်မှုဖြစ် | ဧရာဝတီ
လင်းသန့်| December 20, 2012 | Hits:27,976
14 | | ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် ဂရင်း (ဓာတ်ပုံ – East-West Center)
အရှေ့တောင်အာရှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးအတွက် အမေရိကန် ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်
အမေရိကန်-မြန်မာ စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားကို သွားခွင့်မရ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment လူပြောင် December 20, 2012 - 5:26 pm	“ဦးသိန်းစိန်က စစ်တပ်ကို အပြည့်အ၀ မထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူး။ မာရှယ်လော (စစ်အုပ်ချုပ်ရေး) ကြေညာနိုင်တဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ အာဏာပိုင်တွေထဲမှာ သူက ဆန္ဒမဲ တ၀က်လောက်ပဲ ရနိုင်သေးတယ်။ အချိန်မရွေး လွှတ်တော်ကို ပိတ်ပစ်လို့ ရနေတယ်” ဟု ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် ဂရင်းက Geogorgetown Journal နှင့် “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်” အမည်ရှိ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ပြောကြားထားသည်။
မှန်လိုက်လေကွယ်။ ဘာ့ကြောင်လဲဆိုတော့ လက်နက်ကစစ်တပ်တခုတည်းမှာရှိနေပြီး လွှတ်တော်ကလူတွေမှာ ပြောဖို့ပါးစပ်တွေပဲရှိကြတာလေ။ လွှတ်တော်ကစစ်တပ်ကိုကြောက်စရာမလိုအောင် လွှတ်တော်အမတ်တွေအမေရိကန်မှာစစ်သင်တန်းတက်ပြီး လက်နက်ကိုင်ကြရမယ်။ ပြီးတော့အမေရိကန်မှာလိုပဲ ပြည်သူတိုင်းသေနတ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် စစ်တပ်ကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဟဲဟဲ..။
Reply	သန်းသန်း December 20, 2012 - 9:02 pm	ကျွန်ေ တ်ာသတင်းအမြဲစိတ်ဝင်စားသူတစ်ေ ယာက်ပါ သတင်းအမှန်ရေ အာင်တဘက်တလမ်းကူညီေ ပးသွားမှာပါ
Reply	သန်းသန်း December 20, 2012 - 9:10 pm	ကျွန်​တော်မူဆယ်သားပါ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ကုန်းကလားအ​နောက်ဘက်ရွာမှာ ဘိမ်းအ​ရောင်း​ပေါများ​နေပါတယ် မူးယစ်​တွေရဲ​တွေဘာ​​ကြောင့်မဖမ်းတာလဲ
Reply	bohtut123 December 20, 2012 - 11:00 pm	စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရာဇ၀တ်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်
Reply	bohtut123 December 20, 2012 - 11:11 pm	စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရာဇ၀တ်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ။
Reply	aungkokohtike December 21, 2012 - 2:56 am	great. i achieve many kinds of thinking from here. thank you so much.
Reply	Shwe Yoe December 21, 2012 - 6:12 am	According to the constitution drafted in 2008, President is not commander in chief. This is terrible. President must be commander in chief. And Secretary if Defense also must be head of the Defense Department. Min Aung Hlaing is supposed to be chairman of joint chief of staffs but Than Shwe cleverly drafted the current constitution which makes President Thein justapuppet president. Military is likeastate insideastate or autonomous department outside of the Union Government.
Reply	pps12345 December 21, 2012 - 11:34 am	လူပိန်း နည်း နဲ့တွေးရင် သိန်းစိန် အောက်မှာ စစ်တပ်မရှိတာတောင် ပိုကောင်းသေး။ စစ်တပ်သာ ရှိရင်တော့ လက်ပံတန်း တောင်မှာ ရဟန်းတွေ အသက်ပျောက်သွား နိုင်တယ်။ ဟီးဟီး တရုတ် ကကျေး ဇူးရှိတယ် တဲ့။ ပြည်သူရွေး ပါတီ ကို ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေကို ထောက်ခံပေးတဲ့ကျေးဇူး။ ကို အောင်မင်း၊ ကိုစိုးသိန်း နှင့် ကိုသိန်းစိန် တို့လို့ အလိမ်အခေါက်ကောင်းပြီး မျက်နှာပြောင် တိုက်သူများကို ဗိုလ်မှူး ဘဝကနေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ သူတို့ ဆရာတွေကို ထောက်ခံပေးတဲ့ကျေးဇူး။ အခုတော့လည်း တရုတ် ကကွန်မြူနစ် ကို ထောက်ခံခဲ့လို့ တိုင်းပြည် မွဲခဲ့ရတယ်တဲ့။ သြော် ပလောင်းပလဲတွေ။ စစ်တပ်က လည်း သူ့လက်အောက်မှာ ရှိတယ်လို့ပြောလိုက် မပြောလိုက်။ ခင်ဗျားတို့ကို ပြောချင်တယ်။ ဆိုရိုးစကားလေး တစ်ခုပါပဲ။ မင်းမှာကတိ၊ လူမှာသစ္စာ
Reply	မောင်မောင်ကျော်ဝင်း December 21, 2012 - 10:13 pm	သိန်းစိန်ကိုပြောလိုက်ပါ။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့သဘောသဘာဝကိုနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်
Seven Days in May ကိုရှာဖွေကြည့်ရှုပါလို့။
Reply	ဒိုးလုံး December 23, 2012 - 7:48 pm	မေးခွန်းကလေးတခုလောက်(ဦးအောင်မင်း ကို)မေးပါ၇စေ၊တ၇ုတ်ကြီးဟာကျေးဇူး၇ှင်ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ ကျေး
ဇူး၇ှင်လဲ?(မြန်မာပြည်သူ)တွေ၇ဲ့ ကျေးဖူး၇ှင်လား?(၈၈ မှာပြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်ပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်
ဏာ၇ှင်)တွေ၇ဲ့ ကျေးဇူး၇ှင်လား? သူတို့ ၇ဲ့ ကျေးဇူး၇ှင် ဆို၇င် သူတို့ သွားကျွန်ခံကြပေါ့ဘာဖြစ်လို့ ပြည်သူတွေ
တွေကိုကျွန်ခံခိုင်းနေတယ်(ဘယ်သူ့ ကျေးဇူး၇ှင်ဖြစ်သလဲဆိုတာငြင်းခုံခြင်၇င်တက်ခဲ့လေ)စာ၇ှည်မှာစိုးလို့ မေ၇း
Reply	မင်းကြီးညို December 26, 2012 - 11:32 pm	စစ်တပ်ထဲမှလာတဲ့ သမ္မတကြီးတောင် စစ်တပ်ကို မထိန်းချုပ်နှိုင်ဘူးဆိုရင် စစ်တပ်ထဲက
မဟုတ်တဲ့ အရပ်သားသမ္မတဆိုရင်တော့ ပိုပြီးအခက်တွေ့အုံးမယ်။